Fikarohana momba ny firaisana Tantara momba ny fiainana taloha miaraka amin'ny drafitry ny fanahy, fanavaozana ny fifandraisana amin'ny fiainana taloha sy ny fahatsiarovana ny fiainana taloha ara-Geografika: tranga famonoana silamo an'i Mehmet Cosmen | Suleyman Zeytun - Fikarohana Reincarnation
Ny fidoboky ny Mehet Cosmen
Teraka tamin'ny taona 1898 i Mehet Cosmen ary niasa tamina mpamboly tao amin'ny tanànan'i Kayish, any Torkia. Kayish dia 20 kilometatra na kilaometatra avy eo amin'ny tanàna Adana, Vorontsiloza. Tamin'ny taona 1938, fony i Mehet dia 40 taona na taona, dia nanao ny raharaha mahazatra nataony tany amin'ny toeram-piompiany i Mehet. Fotoam-pisakafoana nandritra ny fotoam-pahavaratra izy ary nijinja, nanipy sy nanangona voa. Tao anatin'izany dingana izany, ny soavaly nampiasaina hanatanterahana ireo asa ireo dia rakotra vovoka sy akofa avy amin'ny voa.
Nandeha tany amin'ny Reniranon'i Seyhan i Mehet mba hanasa ny vovoka amin'ny soavaliny. Indray mandeha, dia naka ny soavaly i Mehet mba hosasana amin'ny faritry ny renirano izay matetika no tsy misy. Ny haavon'ny renirano anefa dia nipoitra ary ny toerana izay nalain'i Mehet ny soavaly dia lalina noho ny nandrasana. Nihorohoro ilay soavaly ary somary nahintsy i Mehet teo an-tsoroka, izay namaly tamin'ny fametrahana fehikibo teo amin'ny soavaly.
Nihazakazaka ny soavaly Mehet, ary nanosika an'i Mehet ho any anaty rano lalina, izay nandefana an'i Mehet sy ny soavaly. Tsy afaka nilomano i Mehet ary rehefa hita ny vatany, dia hita izy niaraka tamin'ny sandriny nanodidina ny rantsan-tongotra iray, toa nitetika ny hampiasa ny rantsambatana mba hialana amin'ny fiarovana. Araka ny nomarihina, heverina fa ny taona nandevenana an'i Mehet dia 1938.
Drafitra fanahy, fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy ny fiainana an-tany Geographic: Suleyman mitsidika ny tranony taloha
Suleyman Zeytun dia teraka marenina ary nibitsika nandritra ny taona 1938 tao amin'ny tanàna Tiorka Tiorka, tanàna iray izay niainan'i Mehet Cosmen ary maty. Ny ray aman-drenin'i Suleyman dia i Ramazan Zeytun sy Bedia vadiny. Ny daty marina ho an'ny fahaterahan'i Suleyman dia tsy fantatra.
Ny fianakaviana Zeytun dia nipetraka teo akaikin'ny tranon'ny Mehet Cosmen, izay mbola velona ny mpitondratena sy ny zanany mbola velona. Raha ny marina, ny tranon'i Mehet Cosmen dia metimety 30 avy amin'ny tranon'ny Zeytun.
Raha vao afaka nandeha izy dia nandao ny tranony i Suleyman ary nandeha mivantana tany amin'ny tranon'ny Cosmen. Ian Stevenson dia nanamarika fa ny tokantrano Cosmen dia mifanohitra amin'ny lalana avy any afovoan-tanàna.
Stevenson dia nihevitra fa raha misy ankizy nandao ny trano hihaona amin'ny olon-kafa sy hijery hetsika ao an-tanàna, dia hankany afovoan-tanàna ilay zaza, fa tsy ny mifanohitra amin'izany.
Na izany aza, nilaza i Bedia, reniny fa nandeha an-tongotra tany an-tranon'ny Cosmen "Suleyman isan'andro" i Suleyman. (1)
Ny planeta an-dalamby amin'ny trangam-pitaovam-pandrosoana akaiky
Mariho fa ny famerenana an'i Mehmet amin'ny fiverenany eo akaikin'ny fiainany taloha dia mampiseho ny fandaminana ny fanahiny. Miantso an'io karazana tranga io ahotrangan'ny Reincarnation, tahaka ny fanombohan'ny fanahy ny fiainana amin'ny ho avy mba hiverina indray amin'ny fomba ara-jeografika akaikikaiky ny fiainan'ny fianakaviany taloha, mba hahafahan'ny fifankatiavana amin'ireo olon-tiana amin'ny alàlan'ny vatana vaovao indray.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Suleyman nanoritsoritra ny fiainany teo amin'ny fiainany efa ho faty tahaka an'i Mehet Cosman
Rehefa tsy afa-nandeha i Suleyman ary rehefa nanao ny iray tamin'ireo diany voalohany tany an-tranon'ny Cosmen izy, dia nanomboka nifampiresaka tamin'ny hetsika momba ny fahafatesan'i Mehet Cosmen. Avy any an-tranon'ny Cosmen, izy dia nanondro ny làlana mankany amin'ny reniranon'i Seyhan ka hatrany amin'ny toerana izay nandroahana an'i Mehet. Ny fihetsiketsehana hafa momba ny fandaniana, izay notsidihin'i Ian Stevenson, dia ahitana ireto manaraka ireto:
1. Ian Stevenson dia nanamarika fa i Suleyman dia hamadika ny tanany amin'ny faribolan'ny rantsantanana manondro ny fihetsiky ny soavaly mandehandeha eny amin'ny boribory mba hanosehana ny vato harana mba hanorotoro ny voa.
2. Stevenson dia nanatri-maso an'i Suleyman nitazona ny sandriny sy ny tanany nifanila tamin'ny iray hafa mba hanahafana ny fihazonana ny honina, raha nitodika indray izy mba hahazoana ny soavaly hiditra ao amin'ny renirano.
3. Napetrak'i Suleyman teo an-tsorony ny tanany havanana ary takany ny sorony, mba hampisehoana fa ny soavaly no mamely azy. Ian Stevenson dia nanamarika fa hamitaka an'i Suleyman ary hampiseho ny nifiny hanahaka ny soavaly mitsambikina aminy.
4. Ian Stevenson avy eo dia nanatri-maso an'i Suleyman tamin'ny fampiasana ny tanany havanana amin'ny fihodinana boribory mba hanahafana ny familiana tadim-borona manodidina ny vavan'ny soavaly.
5. Nametraka tànana roa teo anoloany i Suleyman, toy ny hoe nitazona ny andilan-tsoavaly. Avy eo dia hiantehitra amin'ny havia sy aoriana izy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mba hanahafana ny fakan'ny soavaly.
6. Ian Stevenson nanamarika fa i Suleyman dia nampiditra ny rantsan-tanany teo amin'ny vavany mba hampisehoana fa nitelina rano izy raha lavo tamin'ny soavaly izy.
8. Suleyman no nametraka ny tanany havanana teo am-bavany mba hampisehoana fa nilentika izy.
Tamin'ny voalohany, ny fianakavian'i Suleyman sy ny fianakaviana sisa velona tamin'ny Mehut Cosmen dia tsy azon'ireo izay niezahan'i Suleyman hifampiresaka. Nanamarika ny toerana manokana tao amin'ny reniranon'i Seyhan i Mehut, izay nandevona an'i Mehut, miaraka amin'ny sarimihetsika mifanaraka amin'ireo zava-nitranga izay nitarika ny fahafatesan'i Mehut, namela ny fianakaviana hahatakatra fa i Suleyman dia nampita fa izy no Mehut Cosmen taloha.
Fahatsiarovana & fananana taloha: Suleyman kely dia nilaza fa Koran'i Mehet Cosmen sy Buffalo no azy.
Teo anelanelan'ny taona roa sy telo, Suleyman dia nanomboka nanao fihetsika nanandrana naneho fa ny zavatra ao an-tokantrano ao Cosmen dia azy. Nanandrana nitondra ireo zavatra ireo indray avy eo izy tany amin'ny tranon'ny fianakavian'i Zeytun. Ohatra, niezaka ny nandeha an-tongotra niaraka tamin'ny fianakaviana kosmeny Cosmen izy, ary nilaza fa azy izany, ary niezaka nitarika ombidia iray avy tany amin'ny tanin'i Cosmen izy tany an-tranon'ny fianakaviana Zeytun.
Fihetseham-po amin'ny fiainana: Suleyman Manao ny fitiavany ho an'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana Cosmen
Ho an'ny rahalahin'i Mehet Cosman, Saban no anarany, nametraka ny rantsany roa i Suleyman ho mariky ny akaiky.
Ho an'i Hatice Cosmen, ilay mpitondratena an'i Mehet, i Suleyman dia nametraka ny rantsany roa ho marika fa akaiky ny akaiky ary avy eo nanondro ny fony, toa nitady hampiseho an'i Hatice fa nifankatia izy ireo.
Fihetseham-piainana taloha: ny fiarovan'i Little Suleyman ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana Cosmen
Mehmet Cosmen dia nanolo-tena tanteraka tamin'ny vadiny, Hatice, ary niasa mafy mba tsy hananan'i Hatice asa any ivelan'ny tranony. Taorian'ny fahafatesany dia tsy maintsy niasa tamin'ny olon-kafa tao an-tanàna i Hatice, nanao asa toy ny mofo entina. Rehefa nahita i Suleyman fa miasa ho an'ny hafa i Hatice, dia tezitra be izy ary nanomboka nitomany ary nanao fihetsiketsehana nanambara fa diso ny fiasàny ny hafa.
Raha manaiky hanitsakitsaka ny zanany i Hatice, dia manohitra i Suleyman. Rehefa nifamely hevitra tamin'ny hafa i Abdullah zanakalahy Mehmet, i Suleyman dia hanao hetsi-panoherana ho azy.
Ny fifandraisan'i Suleyman tamin'ny fianakavian'i Mehmet, izay nanomboka tamin'ny faha-telo taonany, dia nitohy hatramin'ny faran'ny 29 taona farafahakeliny. Na dia nifindra tany Adana aza i Suleyman sy ny fianakaviany dia mbola hanohy hitsidika ny fianakaviana Cosman any Kayish i Suleyman.
Nanolotra fanomezana ho an'i Abdullah, zanakalahin'i Mehmet i Suleyman. Ian Stevenson dia nanao izao fanamarihana mampihetsi-po izao manaraka ny fanangonana an'i Suleyman amin'ireo zanakavavin'i Mehmet:
"Nanatrika ny fampakaram-badin'ny zanakavavin'i Mehmet Cosmen izy, nitomany tahaka ny ataon'ny ray be fitiavana." (2)
Niteny i Refika, iray amin'ireo zanakavavin'i Mehmet tamin'ny fanambadiana, fa matetika i Suleyman no mitsidika ny fianakaviany any amin'ny faritr'i Taurus ao Torkia ary mijanona miaraka amin'izy ireo. Mampahatsiahy ny tranga izany Rashid Khaddege | Daniel Jurdi, izay nitsidika ny fiainam-pianakaviany efa taloha, ary nijanona niaraka tamin'izy ireo koa, natory teo amin'ny daba iray natokana ho azy. Ny Khaddege | Mampiseho izany koa ny raharaha Jurdi Ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriny dia mety hifanaraka amin'ny fiainana iray manontolo.
Suleyman koa dia nijanona teo akaikin'ny mananotena i Hatet, Mehmet, Hatice, na dia ny reniny sy ny zanany aza ny fifandraisana, fa tsy mpivady.
Ny fiainana taloha Phobia amin'ny rano
Suleyman dia nanamarika ny tahotry ny rano izay nitohy hatramin'ny faran'ny 27 taona farafahakeliny. Mifanohitra amin'ny mpiara-mianatra taminy, dia tsy nety nianatra nilomano tao amin'ny renirano izy. Nampiseho tsy an-kijanona ny tahotra izy teo amoron'ny reniranon'i Seyhan izay nandefasana an'i Mehmet Cosmen.
Ian Stevenson, MD, avy amin'ny Oniversiten'i Virginia, mikasika ny Valin'ny Valim-panadinana Mehmet Cosmen | Suleyman Zeytun Zava-baovao momba ny fanambadiana zokiolona
Ian Stevenson dia nanamarika fa ny marenin'i Suleyman dia manatanjaka ny maha-marina ny raharaha, satria tsy naheno an'i Suleyman ny fahafatesan'i Mehmet Cosmen tamin'ny resaka nifanaovan'ny hafa. Nanomboka nanandrana nifampiresaka momba ny fiainany taloha toa an'i Mehmet i Suleyman talohan'ny nampianarina hamaky na hanoratra.
Ian Stevenson, nandritra ny fanadihadiana nataony, dia nitady fomba rehetra ahafahan'ny ray aman-dreny sy ireo antoko tafiditra ao anatin'izany ny ankizy rehetra amin'ny fijoroana vavolombelona momba ny fiainana taloha. Naniry ny hamoaka ny hosoka rehetra amin'ny tranga vao teraka izy.
Ian Stevenson dia nanamarika fa tsy ny fahafatesan'i Suleyman fotsiny no nanesorana ny fahafahana hianatra momba ny fahafatesan'i Mehmet tamin'ny resaka nifanaovan'ny olona, ​​saingy mety ho sarotra ho an'ny olona tsirairay ny hampiofana an'i Suleyman haka an-davanona ela. Fanampin'izany, i Ian Stevenson dia nanamarika fa mbola sarotra kokoa ho an'ny olona iray ho mpanazatra Suleyman ny haneho ny fihetseham-pony amin'ny fianakavian'i Mehmet, toy ny hoe mitomany amin'ireo zanakavavin'i Mehmet.
Ny faharesen'i Suleyman sy ny karmic tamim-pahamendrehana
Ireo mponina ao Kayish dia nanontany tena hoe nahoana i Suleyman no teraka marenina sy moana. Nofintinin'izy ireo fa raha mifandray amin'ny karma ny fahasamihafany, dia tsy azo navotsotra tamin'ny fiainan'i Mehmet Cosmen izany, satria nanaiky ny rehetra fa nitondra fiainana feno famindram-po tsy nisy diso i Mehmet. Raha mifandray amin'ny karma ny fahasembanana, dia nihevitra izy ireo fa tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny asa hafa mandritra ny androm-piainana hafa izany.
Ian Stevenson dia nanamarika fa ny ray aman-drenin'i Suleyman, Ramazan sy Bedia, dia zanak'olo-mpiray tam-po. Koa satria fianakaviana biolojika iray ihany izy ireo, dia azo naseho ireo fototarazo mihemotra ho an'ireo fahasembanana ireo. Raha izany, ny fahasembanan'i Suleyman dia mety ho olan'ny génétika fotsiny.
Na ny fahasembanana na ny fahavoazana dia mifandraika amin'ny karma avy amin'ny fampodiana talohan'ny nahaterahana dia olana iray izay tokony ho takatra tsara kokoa ary manolotra fanamby amin'ny ho avy ho an'ireo izay tafiditra amin'ny fikarohana momba ny vatana vaovao.
Drafitra an-tsitrapo, trangam-pandrosoana gorodona akaiky: Mehmet Cosmen dia toa nateraka indray tamin'ny naha Suleyman Zeytun teo akaikin'ny tranony taloha tany Kayish, Torkia. Na dia tsy teraka tamin'ny nofo ara-teknika tao amin'ny fianakaviana iray aza i Mehmet, dia teraka tao amin'ny fianakaviana iray izy izay nanome azy fidirana mivantana amin'ny fianana taloha. Ny karazana tranga dia antsoina hoe "tranga akaiky", satria ny fanahy dia namorona vatana vaovao teo akaiky teo ny fahatongavany ho nofo mba hifandray amin'ny olon-tiana.
Azafady mba mariho fa ny famerenana amin'ny laoniny ny varavarana taloha amin'ny fiainana taloha mba hiverenana miaraka amin'ny olon-tiana dia mitaky drafitry ny fanahy avy any amin'ny faritra ara-panahy.
Raha vantany vao afaka nandeha izy, dia nankany amin'ny trano fonenan'i Mehmet taloha i Suleyman ary nanohy nanavao ny fifandraisana tamin'ireo olona taloha. Ian Stevenson dia nanamarika fa ny fifandraisan'i Suleyman tamin'ireo zanak'i Mehmet dia matanjaka tokoa ka tamin'ny fampakaram-badin'ny zanakavavin'i Mehmet dia nitomany toa ny raim-pianakaviana be fitiavana rehetra izy.
Toy ny amin'ny tranga rehetra momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana, ny fandrindrana ny fanahy dia tafiditra amin'izany. Ny fanahin'i Mehmet Cosmen dia toa nanomana ny fampiarahana manaraka ho azy mba ho teraka eo akaikin'ny fiainany taloha, mba hahafahany miverina any amin'ny fiainany taloha.
Phobia avy amin'ny Fahatongavana ho nofo: Maty tsy maty i Mehmet ary naneho ny tahotra ny rano i Suleyman, indrindra teo amin'ny toerana teo amoron'ny renirano Seyhan izay nandefasan'i Mehmet.
Fiovana amin'ny finoana: Voamarika fa nilaza ny Suleman ny CORAN avy amin'ny tokantrano Cosmen ho azy manokana ary niezaka ny hamerina azy any amin'ny tranon'ny fianakaviana Zeytun. Izany dia midika fa silamo ny Mehmet Cosmen ary tsaroanay, noheverina fa tena nanam-pinoana izy.
Ian Stevenson dia tsy manondro manokana ny fivavahana Suleyman sy ny fianakaviany, fa azo antoka kosa ny milaza fa nino ny fitsangatsanganana ny vatana vaovao indray izy ireo, toy ny fahatsiarovan'i Suleyman ny fiainany taloha fony i Mehmet Cosmen dia fantatra sy voamarina.
Ny fihenam-bidy: Na dia tsy fantatra aza ny daty nahaterahan'i Mehmet sy ny fahaterahan'i Suleyman, dia nanombatombana ny rain'i Ramazan, Suleyman, fa ny fifandresen-dahatry ny fahafatesan'i Mehet sy ny fahaterahan'i Suleyman dia dimy ka hatramin'ny folo andro.
Nanazava i Ian Stevenson fa matetika ireo kalitao mponin'i Kayish dia tsy nanondro ireo kalandrie matetika, saingy nahatsiaro trangan-javatra manan-danja teo amin'ny fiarahamoniny izy ireo. Ny fandevonan'ny mpikambana iray ao an-tanàna sy ny fahaterahan'ny zanakalahy dia ny hetsika izay ho tsaroan'i Ramazan miavaka sy toy izany, fa ny hevitr'i Ramazan dia mety marina.
Raha misy mihevitra fa ny fanahy dia tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny foetus ary raha toa ka ny 5-10 andro fotsiny no nahatonga ny fandevenana an'i Mehmet sy ny fahaterahan'i Suleyman, dia niaina ny foiben'ny fandrosoana an'i Suleyman ny fanahin'i Mehmet satria ny fotoana manontolo dia i Suleyman ao an-kibo. Io fanahy io dia nanosika an'i Suleyman, izay tao an-kibo ary i Mehmet, izay mbola velona, ​​nandritra ny sivy volana.
Izany tranga izany ihany no voamarika tamin'ny tranga manan-danja indrindra Hanan Monsour | Suzanne Ghanem, raha teraka 10 andro taorian'ny nahafatesan'i Hanana i Suzanne. Izany no nahatonga an'i Hanan ho velona nandritra ny fotoana manontolo izay tao an-kibo i Suzanne, nanondro fa ny fanahin'ireo vehivavy roa ireo dia nanangona vatana roa indray mandeha. Ny Monour | Ny tranga Ghanem dia mampiseho izany Ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriny dia mety hifanaraka amin'ny fiainana iray manontolo.
Io trangan'ny fanahy io izay mipetraka mihoatra ny vatana iray amin'ny fotoana iray dia antsoina hoe fisarahana indray. Ny iray amin'ireo ohatra mampihetsi-po indrindra amin'ny fisarahana ny fisarahana dia hita ao anatin'ireo tranga mampikorontan-tsaina Penney Peirce. Ny fanahin'i Penney dia toa niaina ny vatan'ireo roa tamin'ny lasa nanjaka, ny an'i Alice Cary sy Charles Parkhurst, izay niainan'ireo 29 taona roa ireo.
Nahoana ny fanahy dia mifamatotra amin'ny vatana mihoatra ny iray isaky ny mandeha? Ny antony lehibe iray dia ny hahavita zavatra bebe kokoa, anisan'izany ny fanaovana karma sy fandraisana anjara amin'ny tetikasa izay manan-danja amin'ny fanahy. Azo atao ihany koa ny ahafantaran'ny fanahy ny fisehoan-javatra iray, toy ny fahafatesana ho avy, ary manomboka fomba vaovao hanohizana ny asany na ny fihazonana ny fifandraisana amin'ny havana
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 262
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 266